Georgia, Bakuriani को स्की रिसोर्ट: वर्णन, सुविधा र समीक्षा
एक पटक स्की मा आराम गर्न आए हरेकले Georgia को रिसोर्ट्स Bakuriani, लामो प्रभावित रहन्छ र फेरि यहाँ आउन चाहन्छ। यहाँ रहन - यो सिर्फ स्कीइंग छैन। हरेक पर्यटक किनभने हामी सबै थाहा छ, स्थानीय आकर्षण अन्वेषण गर्न, र यहाँ तिनीहरूलाई प्रशस्त र अतिथि मार्फत हिंड्न, राष्ट्रिय रंग रमाइलो गर्न यहाँ मौका भएको Georgians कि - सबै भन्दा सत्कार मान्छे। हिमाल मा, तपाईं पहाड चुचुराहरूको को सौन्दर्य प्रशंसा घण्टा खर्च गर्न सक्छन् जबकि, अल्पाइन Meadows, पाइन वनको गन्ध मा सास फेर्ने सफा पर्वतमा हावा आनन्द।
यस रिसोर्टमा बारेमा सामान्य जानकारी
सबैभन्दा जाडो खेल को प्रशंसक लोकप्रिय को एक स्की रिसोर्ट Bakuriani Georgia छ। यो Trialeti सीमा को ढलान मा काकेशस पहाड मा स्थित छ। नजिकैको 37 किमी प्रसिद्ध Borjomi रिसोर्ट, लामो यसको खनिज पानीका मुहानहरू लागि प्रसिद्ध छ जो फैलिएको। Bakuriani 1700 मिटर समुद्र स्तर माथि rises। द सफा पर्वतमा हावा, को XIX सताब्दी मा शंकुधारी वनको सुन्दरता को शाही परिवार यी भागहरु आकर्षित। अब सम्म, त्यहाँ शाही दरबार रह्यो। Serpentine - संकीर्ण-गेज सडक Borjomi र Bakuriani, यो फ्रान्सेली इन्जिनियर एफिल निर्देशन अन्तर्गत बनाइएको थियो जडान।
स्की रिसोर्ट घाम यसको धेरै दिनको लागि पर्यटक हजारौं आकर्षित, मौसम यहाँ लामो समय रहन्छ। सोभियत समयमा, यी ठाउँहरू सिर्फ एक राजनीतिज्ञ लागि "Mecca" थिए। को 30 सेकेन्ड मा पहिलो एक यहाँ पार्टी सदस्य ए Zhemchuzhnikov तल स्की, त्यसपछि यहाँ सबै कुलीन आराम गर्न आए। पछि यो आधारमा skiers सबै सोभियत प्रशिक्षित टोली, यी ठाउँहरू सबै भन्दा प्रसिद्ध खेलाडीहरूलाई, ओलम्पिक च्याम्पियन भ्रमण गर्नुभएको थियो।
नजिकैको विज्ञान को जोरजियन एकेडेमी पर्छ जो दुर्लभ सौन्दर्य को वनस्पति उद्यान छ। हालसालै, यूरोप Georgia को धेरै लोकप्रिय स्की रिसोर्ट्स छन् बीचमा, Bakuriani ती स्थानहरू मध्ये एक हो। के adventurers आकर्षित? फ्रिराइड - ओरालो untrodden, neukatannym ढलान। चलिरहेको Sannikov लागि तीन जम्पिङ र निशान त्यहाँ पास क्रस-देश skiers लागि Tskhratskaro निशान, मा।
मौसम Bakuriani मा
यस रिसोर्टमा Bakuriani बस सिद्ध मा मौसम स्कीइंग पहाड मनोरञ्जनको सबै प्रेमीहरूको लागि। स्की सिजन नोभेम्बर यहाँ सुरु र मार्च सम्म रहन्छ। जाडो पर्याप्त हिउँ, तर धेरै नरम छ। Bakuriani Georgia को स्की रिसोर्ट सधैं सूर्यका एक अतिरिक्त घमण्ड गर्न सक्छन्, त्यहाँ पर्यटक उत्कृष्ट मुड सँगसँगै, सधैं प्रकाश र आनन्द छ। तर पहाड जा रहेको छ, घाम लगाउन भूल छैन। को स्थानीय बीच यो स्थान मात्र "रवि उपत्यका" भनिन्छ। जाडो को बीचमा, जनवरी मा, औसत तापमान मात्र -7 डिग्री छ। हावा त्यहाँ सानो छ, त्यसैले यसलाई त्यहाँ सधैं न्यानो छ जस्तो देखिन्छ। यो अक्सर ढलान skiers, skiers swimsuits मा पाउन सकिन्छ। हिउँ आवरण 60 सेन्टिमिटर पुग्यो। Snowfalls छन् साधारण, तर avalanches धेरै दुर्लभ छन्। स्पा मा गर्मी छैन तातो गर्छ। औसत जुलाई तापमान मात्र 15 डिग्री पुग्यो।
Bakuriani Georgia को स्की रिसोर्ट। क्षेत्रीय ट्रयाक र kanatok
पर्वतमा को डाउनहिल स्किइङ ढलान लागि मुख्य क्षेत्र Kokhta छन्। 1800 2,850 गर्न मीटर को ऊंचाई। यस रिसोर्टमा मा स्किइङ लागि दुई कार्यात्मक ढलान छन्। "Kokhta-1" कुशल skiers, पेशेवरहरुको लागि डिजाइन गरिएको छ। ट्रयाकको 1.5 मी, दुई notches एक लम्बाइ छ। 52 डिग्री को एक कोण, दोस्रो चरण (रातो) मा 400 मीटर तल ट्रयाक पहिलो भाग 1 किमी को लम्बाइ एक sloping विस्तार भएको छ। ट्रयाकको "Kokhta-2" (रातो र नीलो) दुवै ठाडो र हल्का स्की लागि कोमल, एक दुई चरण,3किमी फैलयो पनि साइटहरु को एक किसिम छ। पहिलो Georgia मा हिउँदमा स्किइङ लागि गुलाब गर्नेहरूका लागि, अझ कोमल मार्ग पठार छ। यसको लम्बाइ केवल 300 मीटर र 10 डिग्री को झुकाव कोण छ। कार्य यहाँ लिफ्टहरु तान्नुहोस्। महारत जहाँ उचाइ फरक 1780 मिटर देखि 2670 मिटर गर्न छ रिसोर्टमा घनिष्ठ पहाड Didveli। त्यहाँ कालो, नीलो, रातो रन छन्। एक ट्रक लिफ्ट र कुर्सी प्रकार काम। रिसोर्ट मा टोबोग्यानिङ लागि मार्ग 1350 मिटर को एक लम्बाइ छ।
जहाँ Bakuriani मा रहन?
को जोरजियन स्की रिसोर्ट्स भ्रमण निर्णय गर्नेहरूका लागि रहन कहाँ राम्रो? समीक्षाएँ जो यहाँ भ्रमण सबै मात्र उत्साहित छोड्दा Bakuriani, धेरै सहज होटल प्रदान गर्दछ।
"Bakuriani हिल्स"। होटल 45 मान्छे को लागि डिजाइन, Bakuriani पार्क नजिकै स्थित छ। तीन-मंजिल्ला सहज भवन। यो एक सहज रहन को लागि सबै सुविधाहरु पनि समावेश छ। यसको आफ्नै बार, भोजन, पार्किङ, सुकाउने र इस्त्री कोठा छ। को अनुकूल कर्मचारी आरामदायक र न्यानो सिर्जना गर्छ।
"प्रिमियर महल"। 225 आगन्तुकहरूलाई आधुनिक होटल। एसियाली, युरोपेली पल्ट, इन्टरनेट क्याफे, एक नाइट क्लब, एक बच्चाको कोठा (नर्स संग), टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स छ। यो एक स्की प्रशिक्षक, स्की उपकरण भाडा संचालित।
"युरेका"। होटल को ढलान नजिकै एक प्रतिष्ठित स्थान ओगटेको छ। पर्यटक विभिन्न प्रकारका 25 कोठा को निपटान मा। त्यहाँ एक जाडो बगैचा, बार, सम्मेलन कोठा, सना, पूल, बिलियर्ड्स, जिम, फिटनेस सेन्टर, जैकुजी छ। ऐतिहासिक साइटहरु को अन्य किनारा मा Borjomi मा यात्राहरु।
Gudauri स्की रिसोर्ट। मूल्यहरु र समीक्षा
Gudauri - धेरै जवान जोरजियन स्की रिसोर्ट। यो चुनौतीपूर्ण ट्रयाक अन्वेषण गर्न प्रेम skiers आकर्षित गर्छ। पर्यटकहरु देखि प्रतिक्रिया, को पूर्वाधार अझै पूर्ण विकसित छैन, तर धेरै स्किइङ एक रमणीय अनुभूति छोड्छ। प्रकृति, सौन्दर्य, पहाड ताजा हावा - यो सबै बस मनोरम छ। केही सम्म पसलहरूमा प्राप्त गर्न भनेर गुनासो, सबै तपाईं एक उच्च मूल्य मा होटल मा किन्न आवश्यक छ। छैन पैसा छोटो गर्नेहरूलाई, यो कमी नोटिस गर्नुभएन। क्याम्पस मा 12 होटल छन्। जीवित लागत प्रति दिन 50 200 डलर देखि लिएर, कक्षा मा निर्भर गर्दछ। सबै होटल रेस्टुरेन्ट पर्यटकहरु सेवाहरू, बारहरू प्रस्ताव। त्यहाँ साउना, एक जक्यूजी, स्विमिंग पूल छन्। सबै कोठा उपकरण संग सुसज्जित छन्। थप आर्थिक आवास विकल्प देख गर्नेहरूका लागि राम्रो विकल्प छ। एक ठूलो कम्पनी वा परिवार तपाईं एक निजी घरेलु, 90 150 डलरसम्म देखि प्रति रात दायरा मूल्य भाडामा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक सिजन Georgia को स्की रिसोर्ट्स, Bakuriani Gudauri कुनै पनि छ, पर्यटक हजारौं द्वारा भ्रमण छ। रोमान्स र एड्रेनालाईन को आफ्नो खुराक प्राप्त गर्न इच्छा आकर्षित गर्छ। ट्रेल्स Gudauri विशेष, विभिन्न लम्बाईहरू छ। तिनीहरूले ढलान Sadzele, Kudebi मा झूठ। बाट23 किमी को औसत लम्बाइ। लम्बाइ को लम्बाइ -7कि। उचाइ मा फरक सबैभन्दा खतरनाक 1000 मीटर छ, फरक छ। ट्रेल्स ज्यादातर रातो र नीलो छन्। उनको कुल लम्बाइ 16 किलोमिटर छ। अष्ट्रीया विशेषज्ञहरु केवलवे Doppelmayer निर्माण गरिएको थियो herein 3-र4कुर्सी लिफ्टहरु छन्।
आर्मेनिया Garni (मन्दिर)। आर्मेनिया आकर्षण को गणतन्त्र
मास्को अचल सम्पत्ति। मास्को र मस्को क्षेत्र Granges
त्यो आफैलाई र आफ्नो प्रियजनलाई एउटा उपहार रूपमा संयुक्त अरब एमिरेट्स बाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ?
बोस्टन (एमए) - अमेरिकी क्रान्ति को पालने
सूजी स्वादिष्ट र स्वस्थ बिना गोभी cutlets।
विश्व राजनीति - यो के हो? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र यसको सुविधाहरू
एलईडी संकेत खोल्न - indifferent पारित ग्राहकहरु र ग्राहकहरु छोड्न हुनेछ!
काला सागर मा Berezan द्वीप
Lazarevskoye कहाँ छ? काला सागर Lazarevskoye